Kulankii lagu heshiisiin lahaa dagaal oogayaasha Soomaalida oo dib u dhacay ilaa 18 december.
Nairobi,Kenya,08 December 2003 �Kulan horay loo qorsheeyey oo ay yeelan lahaayeen dagaal wadayaasha soomaalidu oo 9-ka bishan oo berito ku beegan lagu qaban lahaa magaalada Mombassa ayaa dib ugu dhacay December 18,sidaas waxaa sheegay wasiirka arimaha dibada ee dalka Kenya Mr Kalonzo Musyoka,mar ay shir maanta ay isugu yimaadeen wasiirada arimaha dibada ee dawladaha ku midoobay ururka IGAD.
Todobada wadan ee ku midoobay ururkaas IGAD iyo madax ka kala socota Maraykanka,Talyaaniga,iyo Ururka midowga Yurub ayaa mudo hada ah sanad waxay isku dayayaeen bal inay wax heshiis ah uun dhex dhigaan kooxaha kooxaha soomaalida ee ku shirsan Nairobi,iyadoo uu hada shirku marayo meeshii ugu danbeysey ee awood qaybsiga ayaa waxa soo wajahay caqabooyin badan oo ilaa hada xal loo la,yahay.
Mr. Musyoka isaga oo sharaxaad ka bixaniya sababta markana kulankii lagu balansanaa dib loogu dhigay mudada 10-maalmood ah,ayaa wuxuu sheegay in sababtu ay tahay madaxweynaha dawlada ku meelgaadhka ah ee wakhtigeedu dhamaaday Mr Abdiqassim Salat Hassan,uu codsaday wakhti uu kulan la yeesho madaxda shirka wada intaan Mombassa la tegin.
Laakiin Mr. Musyoka ayaa wuxuu dhaleeceeyey codsiga Cabdiqaasim. "Arintani waxay la mid tahay caqabadooyin hore oo Cabdiqaasim wakhtiga nagaga qaaday,waxa kaliya uu rabaana waa in uu ku iibsado wakhti dheeraad ah oo la is daba jiitamo,arintaasna anagu waxaan ku talinay in aanay mar danbe dhicin," ayuu yidhi,isagoo cadho ka muuqato.
Mr.Cabdiqassim,oo uu weheliyo Muse Sudi Yallahow iyo dagaal oogayaal kale, ayaa ka baxay shirka wakhri hore,iyagoo ka cabanayey qodobo ku jira dastuurka iyo iyo habka shirku u socdao.Qaar ka mid ah dagaal oogaayaasha xamar jooga ayaa waxay ku dhawaaqeen in la isugu yimaado shir kale oo shirka Nairobi ka socda ka soo horjeeda in la isugu yimaado Muqdisho.
Ka bixidii uu Cabdiqaasim ka baxay shirka waxay sii xumaysay,kala qaybsigii ay horayba dawlada wakhtigeedu dhaaday ee Carta kala qaybsanayd,iyadoo uu is barbar yaac fool xumi ka muuqdo,kooxaha sheeganaya inay iyagu dawlada metelaan oo laba qaybood ah.
Dadka indha-indheeya siyaasada ayaa waxay tilmaamayaan in ay gudiga farsamada ee IGAD ku adkaan doonto inay Cabdiqaasim iyo dagaal oogayaasha kale ee shirka ka baxay inay ku shukaamiyaan,inay mar labaad ku soo noqdaan miiska shirka.Waxay kaloo tilmaamyaan inay adkaan doonto in shirku uu guulaysto hadii aan lagu guulaysan in shirka ay dagaal oogayaasha oo dhami soo wada xaadiraan.
Mr. Musyoka ayaa kulankii maanta dhacay xidhitaankiisii ku sheegay in dagaal ooge kasta oo lagu casuumay inuu ka soo qayb galo kulanka Mombassa,isla markaana soo xaadiri waaya ayaa yidhi"waxaan u arkaynaa in aanay wax dan ah ka lahayn in dib loo heshiiyo,isla markaana waxaa loola dhaqmi doonaa sida niman nabada neceb".
Saraakiisha shirka wada ayaa sheegay in kulanka la isugu imaan doono 18 December uu yahay jaaniskii ugu danbeeyey ee la isugu keeni lahaa dagaal oogayaasha iyo raga kale ee kooxaha madaxda u ah ee shacabka ah,kuwaas oo lagu qiyaasayo inay ka koobnaan doonaan 40-tameeyo,si bal loo heshiisiiyo,isla markaana uu shirku horay ugu socdo,si loo gaadho heshiis kama danbays ah.
Kulankaasi marka uu qabsoomo,hogaamiyayaashaas,iyo in ka badan 350 oo ergada shirka ah ayaa laga filayaa inay dhamaystiraan dastuurka dalka soomaaliya,isla markaana ay doortaan xubnaha baarlamaanka,gudoomiyaha baarlamaanka,iyo madaxweynaha dawlada ku-meel gaadhka ah ee Soomaaliya.
Shirka dib-u-heshiisiinta soomaalida ee Nairobi ayaa waxuu isu keenay madaxbadan oo ka socota wadamo badan oo afrikaan ah iyo in ka badan 20 dagaal ooge oo soomaaliyeed,kuwaasoo wadankii soomaaliya dhiig ku dadinayey mudo ka badan 13 sano,kadib markii ay burburtay dawladii dhexe ee soomaaliya ee uu madaxda u ahaa la ha u naxariistee General Maxamed Siyaad Barre.